Flatbed CO2 Machine manapaka laser
Digital Laser Die Cutter ho an'ny Label
Kapila fanamoriana sora-pasika
Sarimihetsika fandefasana taratra
Slide teo aloha︎
Slide manaraka▶ ︎
Antsipiriany voalohany slide.
Antsipiriany momba ny slide faharoa.
Antsipiriany momba ny slide fahatelo.
Goldenlaser dia mifantoka amin'ny fanomezana vahaolana laser marani-tsaina, nomerika ary mandeha ho azy.
Mpanamboatra rafitra laser ho an'ny fanapahana, fanaovana sokitra ary fanamarihana. Ny manam-pahaizana manokana ao amin'ny milina fanapahana laser CO2 , Galvo tamin'ny laser milina sy Hafanàm-po an tamin'ny laser maty fanapahana milina .
Manomboka amin'ny fakan-kevitra voalohany ka hatramin'ny fizahana fampiharana miaraka amin'ireo fitaovana noforonina tamina indostria manokana ka hatramin'ny fampiofanana ho an'ny mpampiasa sy serivisy manerantany - Goldenlaser dia manome vahaolana laser feno, tsy milina tokana!
CO2 MPANORATRA MASINA
Laser maty maty
Masinina haingam-pandeha laser vita amin'ny lamba vita amin'ny indostrialy
Ity andiany ity CO2 milina fanapahana laser fisaka natao ho an'ny horonana lamba sy fitaovana malefaka mandeha ho azy ary manapaka tsy tapaka. Nentina tamin'ny alàlan'ny fitaovana sy ny valizy niaraka tamin'ny motera servo, ny fanapahana laser dia manome ny hafainganam-pandeha farany haingana sy haingana.
Sivana Lamba Laser Cutting Machine
Fiara mifono vy avo lenta sy entona. Manapaka haingana hatramin'ny 1200mm / s. CO2 RF laser 150W ka hatramin'ny 800W. Rafitra mpampita rivotra. Auto-feeder amin'ny fanitsiana fihenjanana. Mety amin'ny fanapahana lamba sivana, tsihy sivana, polyester, PP, fiberglass, PTFE ary lamba indostrialy.
Masinina fanapahana laser vita amin'ny rivotra lamba
Fitambarana endrika lehibe X, fanapahana laser axis Y (fanapahana) ary perforating haingam-pandeha Galvo (lavaka tapaka laser). Natao ho an'ny fanapahana ny fantson-drivotra fanodinana lamba (fantson'ny sock, fantson'ny sox, sox duct, sock duct, duct air textile, sock air, sox air)
Masinina fanapahana laser haben'ny latabatra lava
Extra Long Cutting Bed - Specialty 6 metatra, 10 metatra ka hatramin'ny 13 metatra ny am-pandriana habe ho ela fanampiny fitaovana, toy ny lay, sailcloth, elon'aina, paraglider, eloelo, marquee, eloelonao, parasail, sunshade, karipetra fiaramanidina ...
Galvo & Gantry Laser Engraving Cutting Machine ho an'ny lamba, hoditra
Ity rafitra laser ity dia manambatra galvanometer sy gantry XY. Ny Galvo dia manolotra sokitra haingam-pandeha, sokitra, perforating ary fanapahana fitaovana manify. XY Gantry dia mamela ny fanodinana piraofilina lehibe kokoa sy tahiry matevina kokoa.
Mihodina mihodina milina fanoratana laser amin'ny lamba manidina
3D rafitra Galvo mavitrika, mamarana ny fanoratana sokitra mitohy amin'ny dingana iray. Teknolojia laser "on the fly". Mety amin'ny lamba lehibe endrika, lamba, hoditra, denim, sokitra EVA.
Masinina haingam-pandeha amin'ny laser Galvo haingam-pandeha ho an'ny kiraro hoditra
Laser laser laser RF 150W 300W 600W. Rafitra fanaraha-maso galvanometra 3D mavitrika. Milahatra miakatra sy midina ny axis Z. Latabatra fiasan-tantely tantely alika vy mandeha ho azy.
Galvo Laser Perforating Cutting Machine ho an'ny Sandpaper Abrasive Discs
Rafitra fitiliana galvanomètre midadasika. Loharano laser marobe mba hampitomboana ny vokatra. Famahanana sy famerenana mandeha ho azy - mandeha ...
Sublimation Fabric Laser Cutter ho an'ny fanatanjahan-tena
Ny laser laser dia mety amin'ny fanapahana lamba vita amin'ny lamba nomerika amin'ny endriny sy habe rehetra. Ny fakantsary dia mizaha ny lamba, mahita sy mamantatra ny contour vita pirinty, na maka marika amin'ny fisoratana anarana vita pirinty ary manapaka ny endrika nofidina tamin'ny hafainganam-pandeha sy marina.
Masinina fanapahana laser tsy miankina Head Dual
Ny rafitra fanapahana laser roa loha tsy miankina dia natambatra tanteraka tamin'ny rafitry ny fahitana marani-tsaina, ary namboarina kokoa tamin'ny fitakiana fanodinana sary vita pirinty.
Model No.: Ampahany MZDJG-160100LD
GoldenCAM Fisoratana anarana Laser Cutter
Ny fisoratana anarana avo lenta dia manamarika ny fametrahana sy ny fanonerana deformation manan-tsaina ho an'ny fanapahana laser amin'ny laoniny ny logo, litera ary isa.
Fanapahana laser lehibe ho an'ny sainam-pirenena, sora-baventy, fambara malemy
Ny fanapahana laser lehibe amin'ny fahitana dia natao manokana ho an'ny indostrian'ny pirinty nomerika - mamokatra fahaiza-manao tsy manam-paharoa amin'ny famitana endrika maro an-tsary na sary miloko vita amin'ny soratra vita amin'ny loko, sora-baventy ary takelaka malefaka.
Roll to Roll Laser Cutting Machine ho an'ny Sarimihetsika sy Tape
Hafainganam-pandeha haingam-pandeha laser matevina haingam-pandeha. Volavola modular sy multifunctional all-in-one endrika. Fampiasana CO2, IR na UV beam delivery mba hanomezana hery sy halavam-potoana isan-karazany. Mety amin'ny horonan-taratasy hanodinana horonantsary, kasety ary adhesives avo lenta.
Mihodina mihodina masinina Laser Cutting Machine
Fanapahana laser tsy manam-paharoa sy vahaolana hamadika ho famaranana ny marika. Ny mpamaky kaody QR dia manohana ny fanovana mandeha ho azy. Ny Torolàlana amin'ny Internet dia mahatonga ny famaharana sy ny famerenana amin'ny laoniny ho mazava kokoa.
Fametahana Laser Cutting Machine
LC230 dia milina famaranana lasantsy, ara-toekarena ary nomerika feno amin'ny haben'ny tranokala 230mm. Safidy tsara ho an'ny hazakazaka fohy dizitaly izy io. Manolotra fiovana aotra amin'ny fotoana ary tsy misy vidin'ny takelaka maty.
Manokana ny vahaolana amin'ny fanapahana laser sy ny sokitra izahay ho an'ny fampiharana marobe. Ireto misy vitsivitsy fotsiny amin'ireo rindranasa izay matetika iasantsika.
Safidio ny indostriao: ny vahaolana laser sahaza indrindra mety aminao.
LEATHER & kiraro
Miaraka amin'ny fanavaozana ny haitao matanjaka, Golden Laser dia afaka manome milina laser sy vahaolana manokana, ataovy mahomby sy mahasoa kokoa ny famokarana anao.
Amin'ny maha-fanavaozana ara-teknolojia ny vanim-potoana, ny laser dia mivelatra miaraka amin'ny tombony tsy manam-paharoa, manolo ny fomba nentim-paharazana bebe kokoa.
Laser Manual an'ny mpampiasa
momba ny Golden Laser (rakitra PDF)
Omeo fanampiana hatrany ny serivisy. Injeniera misy amin'ny milina fanompoana any ampitan-dranomasina ho an'ny serivisy fametrahana, serivisy fanofanana ary serivisy fikojakojana.
Topazo maso eto raha mila fampahalalana momba ny indostria mifandraika amin'izany sy ireo vaovao sy hetsika vao tsy ela akory izay.
LC350 Laser Die-Cutter Niseho tao amin'ny SINO LABEL 2022 indray
Goldenlaser dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny alàlan'ny rafitra fanapahana laser haingam-pandeha haingana vaovao, izay nahasarika mpanjifa marobe mba hijanona sy hianatra momba izany tamin'ny andro voalohany amin'ny SINO LABEL 2022…
Goldenlaser dia manasa anao amin-kitsimpo amin'ny SINO LABEL 2022
Faly izahay mampahafantatra anao fa ny 4 ka hatramin'ny 6 martsa 2022 dia ho any amin'ny tsenan'ny SINO LABEL any Guangzhou, Sina. Goldenlaser dia mitondra ny LC350 vao haingana nohavaozina tamin'ny laser haingam-pandeha haingana rafitra fanapahana maty.
Fanapahana Laser Fibre Carbon: Tombontsoa sy Fampiharana
Ny fanapahana tamin'ny laser fibre karbônina dia azo atao amin'ny laser CO2, izay mampiasa angovo faran'izay kely nefa manome vokatra avo lenta. Ny teknolojia fanodinana ny fibre karbonina fanapahana tamin'ny laser dia manampy amin'ny fampihenana ny tahan'ny fako raha oharina amin'ny teknika famokarana hafa…
Famokarana mazava tsara • Manenjika tsara
Laser Solutions mpamatsy
Tamin'ny 20 taona niainany tamin'ny indostrian'ny laser, mivoatra hatrany ary mampiasa teknolojia mandroso, Goldenlaser dia lasa mpanamboatra milina laser miaraka amina fahaizana manokana.
> Mizaha milina laser
Goldenlaser dia manome anao vahaolana amin'ny laser matihanina ho an'ny indostrian'ny rindrambaiko manokana - hanampy anao hampitombo ny vokatra, hanatsotra ny fomba fanodinana ary ahazoana tombony bebe kokoa.
> Mikaroha vahaolana laser
Ao amin'ny tsena ampitan-dranomasina, Goldenlaser dia nanangana tambajotra marketing matotra any amin'ny firenena sy faritra maherin'ny 100 manerantany, miaraka amin'ireo vokatra mifaninana sy rafitra fanavaozana miorina amin'ny tsena.
> Hahafantatra bebe kokoa momba ny Goldenlaser
CO2 Masinina laser amin'ny ankapobeny
Fitaovana azo tsaboina amin'ny laser
map-marker Goldenlaser Industrial Park, Tianxing Road, Chuanlong Avenue, Distrikan'i Huangpi, Wuhan, Hubei, Sina
Copyright © 2005-2022 Wuhan Golden Laser Co., Ltd. Zo rehetra voatokana.